Into ebalulekileyo xa ukucudisa itafile Injongo ukubona igrafu ekuzeni kwi elibe pa
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Into ebalulekileyo xa ukucudisa itafile Injongo ukubona igrafu ekuzeni kwi elibe pa
Yakutshanje pa parlour, a screen enkulu kumatshini ebizwa ngokuba data Lobo, iivenkile ukuba zifakelwe sele baba baninzi. Le venkile bomnyango ngaphambili kunye counter phambi, njl, kulo matshini sele ifakiwe, netafile yokudlala kutshanje ngabanye data ngalinye, kwaye linokuba jackpot lwangoku, efikelela ukubetha kunye igrafu imali utshintsho ebizwa igrafu esasisikhulu uyakwazi ukubona yomtshangatshangiso, njengenani yeenguqu.
Kwakhona, akukho pa nesendlu data Robo, oko kuza ikhawuntala data kwi kwetafile nganye.
iya kuba ukulwa uhlobo olufanayo indima, kodwa isanda iba imali encinci iinkcukacha kuthelekiswa Unikimbie data. It is a lot enjalo lwazi Robo data sibonile, kodwa idata ofuna kakhulu ezichongiweyo kwi le kufa nganye kunye igrafu yokudlala yenguqu.
Le grafu imali inguqu, kwaye ke imeko kosuku ibhola omnye kwelanga ulikhoboka etafileni kwigrafu umgca lo, le nto kulula ukubona. Intlawulo okanye ngexesha big hit, le meko kunye rhoqo Chan, ungakwazi ukukhangela isidanga olikhoboka lotywala ezilandelayo.
njengoko phezulu nasezantsi intshukumo neqonga imxinwa kule grafu line, ibhola ngaphandle yangoku uzinzile, kuya kuba nzima ukuba sijolise kuma ngamakhoboka.
※ Kakade ke, kukho sele Kakade kusenokwenzeka ukuba ixesha kuphela ezomeleleyo Horukon xa mowari wayehleli ukuma ngoku izinzile.
phezulu nasezantsi ke mabalimele intshukumo ubundlobongela kule grafu, umahluko kakhulu ka iziyobisi kunye nganye, nkqu imini phambi koliqele, xa ungazi amaza kuvela ngesiquphe nomsindo, yitafile apho kukho ingozi yokuba olikhoboka lotywala. Noko ke, ukuma ezinjalo, ekubeni kukho kwakhona amandla umonakalo, kodwa ke ukuzibaxa izinto, siya kuba yinto yokuba iqonga ezinokuthi kulindeleke ukuba avuthele amanye amagama.
Kwaye, ndifuna ukuba ujonge kwenye kakuhle yindlela eqongeni.
umatshini pa na, kodwa kukho hit amathuba enkulu, esimelele ngokwahlukeneyo ngoku okuba le jackpot zangoku kunye nayo, uya kuma lilonke. Vula (iiyunithi nganye jackpot amathuba) izihlandlo ezininzi, uya kuba sisikhokelo oko lifikile jackpot enye. Ngokubanzi, oku Tai 確 Ukuba izinga 180 okanye ngaphantsi, kuya kuba amehlo Injongo eqongeni.
sibe ngaphezulu kwe-180, nayo yonyuswa mali efikelela ukubetha, iba okanye ukulingana ubuncwane wophula kunokuba kuba waphuma. Noko ke, ukuze ufumane iqonga elinjalo 180 okanye ngaphantsi, inyaniso enkulu kakhulu.
Ukongeza, kwi Robo data, uyakwazi ukubona pa ukugcina iinkcukacha yonke. Ukuba olungiswe isiqinisekiso, okanye umgca kakhulu na ukuma nokuthantamisa ye linokuba kwikona itafile kwamanqwanqwa kwaye ukuwa igrafu, uthethe kwisiqithi kufutshane emnyango, emininzi enjalo, nako ukufaka umkhwa yeshishini kuwe.
Kuqala kwinto zonke, isigqibo imodeli ofuna ukubetha, intlawulo kufutshane umgca othe ngqo ukuma igrafu yenguqu kuphela inokuba okanye, khetha itafile rhoqo ukuhlala ngaphezu kwe-avareji umgca, ke, oko aqatha igrafu esasisikhulu ukusuka, ungafuna ukutshatisa ukukhetha itafile eliphantsi kuphela ukuma lilonke.
ezibekwe kwibhodi umdlalo, kwimeko kwedatha kuphela bali akukho ivenkile pa, ukuze ndikwazi amathuba trapezoidal. In
ngoku, ngenxa yokuba kukho kwakhona ekhawuntaleni data eza kubonisa inani elipheleleyo neziphithiphithi, kwi indlela ubalo yaqaliswa ngaphambili, nceda ukwenza izibalo ngokwakho. Imane kumbetha kwakhona, umntu lowo owaxabela ukukhangela amathuba, into apho unokoyisa ngakumbi. , Khetha itafile rhoqo ukuhlala ngaphezu kwe-avareji line, eli xesha, ukuba igrafu ekuzeni le aqatha, ukuze umdlalo ukukhetha itafile eliphantsi kuphela ngayo ukuma lilonke.
ngoku, ngenxa yokuba kukho kwakhona ekhawuntaleni data eza kubonisa inani elipheleleyo neziphithiphithi, kwi indlela ubalo yaqaliswa ngaphambili, nceda ukwenza izibalo ngokwakho. Imane kumbetha kwakhona, umntu lowo owaxabela ukukhangela amathuba, into apho unokoyisa ngakumbi.